सुरु खेलकुद र मनोरञ्जन खिलौने Quadrocopter
Quadrocopter अब सबैभन्दा लोकप्रिय रेडियो-नियन्त्रित मोडेल विमानस्थलको बीचमा छन्। मूलतः अझै पनि रिमोट-नियन्त्रण हेलीकाप्टरहरू सौंपाएको, तिनीहरूसँग अहिले आफ्नै विभाजन छ Multicopter कारण। Multicopter एक को लागि खडा छ उडान मोडेल, जो दुई भन्दा बढी छ विमानमा तल घुमाउने घुमाउरो घुमाउरो छ। विस्तारमा, यस सामान्य शब्दमा पनि समावेश छ:
तीन रोटरहरूसँग ट्रिकप्टर
क्वाड्रोकोप्टरले चार रोटरहरू साथ
6 रोटरहरूको साथ हेक्सकोपटर
8 रोटरहरूको साथ अक्टोकोप्टर
रोटरहरूको पनि उच्च संख्याको साथ विमान मोडेलहरू अब सम्म स्वयं निर्माण वा भविष्यको विकासका लागि आरक्षित छन्, त्यसपछि यस सूची अनुसार यस पूरक पूरै।
Quadrocopter त्यहाँ धेरै फरक डिजाइन र मूल्य दायराहरू छन्, त्यसैले शुरुआती शुरुआती र व्यवसायीहरू आफैले बजारमा उपयुक्त मोडेल पाउन सक्छन्। धेरैजसो Quadrocopter एक उडानको लागि डिजाइन गरिएको हो, त्यहाँ साना पनि छन् इन्डोर मोडेल, जुन बाहिर शान्त मौसममा बाहिर उडाउन सकिन्छ।
1 एक quadrocopter के हो?
2 रिमोट-नियन्त्रण क्वाड्रोकोप्टर कसरी काम गर्दछ?
5 रेडियो रिमोट कंट्रोल
6 प्रापक एकाइ
7 गति नियन्त्रक
8 बिजुली मोटर्स
10 विभिन्न प्रकारका quadrocopters
10.1 Quadrocopter (मिनी quadrocopter) को लागि इनडोर उपयोग को लागि
10.2 क्वाड्रोकोप्टर आउटडोर प्रयोगको लागि
13 प्रविष्टि स्तर मोडेलहरू
15 यदि शुद्ध इनडोर मोडेल चाहिएको छ भने खरिद गर्नु अघि निर्णय गर्नुहोस्। बाहिर, निरन्तर शांत एक उडानको लागि आवश्यक छ।
16 इन्टरनेट वा स्थानीय डिलरमा खरिद गर्ने?
16.1 साइट मा: विशेषज्ञ व्यापार देखि मोडेल
16.2 इन्टरनेटमा: अनलाइन रिटेलरबाट खरिद गर्नुहोस्
17 Quadrocopters को दूरस्थ नियंत्रित विमान र हेलीकाप्टरहरूमा लाभ
एक quadrocopter के हो?
एक हेलीकाप्टरको लागि आवश्यक Quadrocopter कुनै प्रवाह वायुप्रवाह को माध्यम ले बहाव हासिल गर्न को लागि नहीं। एक उडान डाउन-निर्देशित प्रोपेलर्स द्वारा सम्भव गरिएको छ, यसैले ऊर्ध्वाधर लेन्ट र ऊर्ध्वाधर ल्यान्डिंग सम्भव छ। तुलनामा हेलिकप्टर एक चाहिन्छ Quadrocopter तर शायद नै कुनै पनि यांत्रिक घटक, उदाहरण समायोज्य रोटर ब्लेड वा swashplates को लागि। एक टाँट रोटर पनि मेटाउँछ, जुन एक हेलिकप्टर चेसिसमा टोकर्क ट्राफिकलाई संतुलनको लागि आवश्यक छ। एक Quadrocopter टोककको क्षतिपूर्ति गर्न विपरीत रोटरहरू छन्। उडान, स्थिति र आचरणहरू केवल व्यक्तिगत इन्जिनको गति परिवर्तन द्वारा प्राप्त गरिन्छ Quadrocopter विशेष गरी लागि शुरुवात सिफारिश गरियो यद्यपि उनीहरूले हेलीकाप्टरका सबै नियन्त्रण सुविधाहरू छन्।
रिमोट-नियन्त्रण क्वाड्रोकोप्टर कसरी काम गर्दछ?
चेसिसमा चार बूमहरू छन् जसमा चारवटा मोटर मोटर्सहरू प्रत्येक घुमाउरो घुमाईन्छ एक-अर्कालाई आवश्यक दूरीमा। आंशिक रूपमा (मोडेलको आधारमा) मोटर्स र रोटरहरू बीच गियर हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ। रोटरहरूको दुई जोडी विपरीत दिशामा चल्छ, जसले टोककलाई क्षतिपूर्ति गर्दछ र अपेक्षाकृत स्थिर रवैया बनाउँछ। इन्जिन गति परिवर्तन गरेर उडान आन्दोलनहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। केहि मोडेलहरू को रूपमा प्रयोग गर्दछ हेलिकप्टर gyrosस्वतन्त्र रवैयालाई स्थिर गर्न। मा quadrocopters फ्लाइट वजन चार रोटरहरुमा वितरित गरिन्छ। यो एक हेलिकप्टर सानो इन्जिन र रोटरहरूको तुलनामा तुलना गर्न सकिन्छ। यसले अनुमति दिन्छ बलियो निर्माणजसले दुर्घटनाको घटनामा मोडेलहरूलाई क्षति घटाउँछ। साथै अनुमति दिनुहोस् Quadrocopter एक उच्च लोड क्षमता, ताकि तिनीहरू प्राय: क्यामेराहरूसँग सुसज्जित छन्, उदाहरणका लागि। को व्यवस्थित फ्लाइट विशेषताहरु Quadrocopter यो पनि शौक मोडेल उडान भन्दा अन्य उद्देश्यका लागि रोचक बनाएको छ। तिनीहरू प्रयोगका लागि प्रयोग गरिन्छन्, उदाहरणका लागि, निगरानी र ट्राफिक उडानहरूको लागि। ड्राइभ इकाईको अतिरिक्त Quadrocopter अवश्य रिमोट-नियन्त्रित मोडेलहरूको सामान्य घटक:
बिजुली आपूर्ति (ब्याट्री)
रेडियो रिमोट नियन्त्रण ट्रान्समिटर
एक quadrocopter किन्नु अघि, तपाईं कहाँ चाहनुहुन्छ र सोच्न चाहनुहुन्छ यो सोच्नुहोस्। Quadrocopters (ड्रोन) को लागि नियमहरू ध्यान दिन महत्त्वपूर्ण छ।
द्वारा ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (जीपीएस) एक सक्छ Quadrocopter, उदाहरणका लागि रिवल नियन्त्रण आरसी जीपीएस क्वाडकोप्टरअतिरिक्त प्रकार्यहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, जोस्टिक रिलीज हुँदा यो यो ठाउँमा रहनेछ। यसको अतिरिक्त, जीपीएस पनि ट्राफिक दायराबाट सल्लाह दिएको मोडेललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। केहि मोडेलहरूले ट्रान्समीटर वा पूर्व निर्धारित नेभिगेसन बिन्दुहरूको स्वचालित अनुवर्ती अनुमति दिन्छ। टेलिमेन्ट्री डाटा जस्तै गति, उचाई, स्थिति, बिजुली आपूर्तिको प्रभारीको स्थिति अक्सर संचारित हुन्छ।
संग FPV पूर्ण HD क्यामेरा, टाढैबाट नियन्त्रण GHz रिमोट नियन्त्रण र प्रत्यक्ष स्ट्रिम telemetry लागि प्रदर्शन संग Revell नियन्त्रण आर सी जीपीएस Quadrocopter, माथि 20 मिनेट उडान समय, मलाई, घर आउँदै, नेविगेटर 23899Anzeige पालना
जीपीएस प्रणाली (स्थिति होल्ड र आउँदै घर) र मलाई प्रकार्यको अनुसरण गर्नुहोस्
पूर्ण HD क्यामेरा (1.080p) - टाढाको नियन्त्रण प्रदर्शन मा प्रत्यक्ष छवि - माइक्रो एसडी कोर्ट कार्ड 64 जीबी (कार्ड समावेश गरिएको छैन) मा रेकर्डिङ
फ्लिप समारोह संग ब्रुशलेस मोटर्स र2स्पीड स्तर
4 च्यानल 2,4 GHz रिमोट कंट्रोल प्रणाली (स्विच योग्य मोड 1 / मोड 2)
6 अक्ष ग्य्रो प्रणाली, हेडलेस मोड, उचाइ सेन्सर मार्फत स्थिर उडान - एलईडी प्रकाश र प्रतिस्थापन रोट सहित
रेडियो रिमोट कंट्रोल मुख्य रूपमा एक मा पुग्छ Quadrocopter सबै टाढाको नियन्त्रित मोडेलहरूसँग समान आवश्यकताहरू। यसको साथ सबै प्रकार्यहरू रेडियोद्वारा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यहाँ विभिन्न नियन्त्रण च्यानलहरू उपलब्ध छन्। मोडेलको कार्यक्षमतामा आधारित,4देखि6च्यानलहरू वा बढि आवश्यक पर्दछ। रेडियो रिमोट नियन्त्रणहरूको आवृत्ति दायरा 27 मेगाहर्ट्ज, 35 मेगाहर्ट्ज (केवल मोडेल विमानको लागि अनुमोदित) 40 मेगाहर्ट्ज र 2,4 GHz हो। विशेष गरी नयाँ 2,4 GHz रिमोट कंट्रोलहरू उच्च विश्वसनीयताको विशेषता हुन्। यदि मोडेल एक क्यामेरा संग सुसज्जित छ जुन रेडियो को माध्यम ले वास्तविक समय मा रिसीवर मा पठाउँछ, सुनिश्चित गर्नुहोस कि ट्रांसमीटर को कर्जा र क्यामेरा एक दूसरे संग हस्तक्षेप गर्दैन। उदाहरणका लागि, टेलिभिजनको लागि 5,8 GHz दायरा प्रयोग गर्ने वायरलेस क्यामेराहरू छन्। त्यहाँ पूर्ण सेटहरू छन् जुन रिसीवरसँग रेडियो क्यामेरा पहिल्यै समावेश छ। प्रायः तिनीहरूसँग रेडियो रिमोट कंट्रोलमा पनि सानो प्रदर्शन हुनसक्छ, वा कम्तीमा प्रदर्शनको जडानलाई अनुमति दिन्छ।
ट्राफिकका लागि उपयुक्त, एक प्राप्तकर्ता आवश्यक छ। यसले प्राप्त नियन्त्रण संकेतहरू प्रशोधन गर्छ र तिनीहरूलाई घटकहरूमा पठाउँछ, उदाहरणका लागि मोटर्सको गति नियन्त्रकहरू। प्रापकसँग प्रत्येक प्रकार्यको लागि उपयुक्त संख्याको च्यानल हुनु पर्छ र त्यही आवृत्ति दायरामा यसको प्रयोग र रेडियो रिमोट कंट्रोलको च्यानल प्रसारण गर्न हुनुपर्दछ। पुरानो रेडियो रिमोट नियन्त्रणहरूमा, प्लग-इन क्वार्ट्ज (ट्रांसमिटिंग र प्राप्त क्वार्ट्ज) परिवर्तन गरेर एक च्यानल परिवर्तन हुन्छ।
बिजुली मोटर्स गति नियन्त्रकहरूको गति विनियमित गर्न आवश्यक छ जस्तै अन्य बिजुली मोडेलहरू Quadrocopter4इन्जिन चार टुक्रा अनुसार। रिमोट कंट्रोलमा जोस्टिक सञ्चालन गरेर, प्राप्तकर्तासँग जोडिएको गति नियन्त्रकले व्यक्तिगत घुमाउने गति वा सम्बन्धित मोटर मोटर्सको गति विनियमित गर्दछ। गति नियन्त्रण नियन्त्रकलाई स्थिर गर्न पनि ज्योस्कोपेसहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ Quadrocopter ड्राइव।
दक्षताको कारण हुनेछ quadrocopters अक्सर ब्रशलेस मोटर्स प्रयोग। तिनीहरूले धेरै उच्च गति प्राप्त गर्छन् र ब्रश मोटर्सको तुलनामा अपेक्षाकृत पहिरो-प्रतिरोधी हुन्छन्। आन्तरिक दहन इन्जिन सामान्यतया व्यावसायिक मोडेल निर्माताहरू द्वारा मात्र ठूलो मोडेलहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। बिजुली मोटर्सको तुलनामा, तिनीहरू उचाइ हुन्छन्, निकास ग्यासहरू उत्पन्न हुन्छन् र ज्वलनशील र विषैले पेट्रोल मिश्रण चाहिन्छ।
आवश्यक शक्तिको लागि Quadrocopter आपूर्ति संचालक (रिचार्जेबल ब्याट्री), यो बारेमा छ रिचार्जेबल ऊर्जा भण्डारण, ठूलो फाइदा ब्याटरियहरुको तुलनामा छ, तिनीहरूलाई खाली हुने बित्तिकै नविकरण गर्न आवश्यक छैन। बैटरियों पनि लागत कम गर्न को लागि रेडियो रिमोट कंट्रोलहरुमा अधिमानतः प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि, रिचार्जयोग्य ब्याट्रि र चार्जर आवश्यक पर्दछ, जुन प्रायः पहिले नै सेटहरूमा समावेश गरिएको छ।
विभिन्न प्रकारका quadrocopters
साइज, उपकरण र इच्छित प्रयोगमा निर्भर गर्दछ, त्यहाँ विभिन्न प्रकार र व्यापारको मोडेलहरू छन् Quadrocopter उपलब्ध। आफैलाई आदर्श मोडेल छान्नुहोस्। हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी छौं!
Quadrocopter (मिनी quadrocopter) को लागि इनडोर उपयोग को लागि
सानोको जस्तै मिनी हेलिकप्टर त्यहाँ पनि छ मिनी Quadrocopter, तिनीहरू विशाल कोठाहरू, हल्स वा भित्तामा पनि भित्ताका लागि उपयुक्त छन्, भित्री प्रयोगका लागि पनि। तिनीहरू धेरै सानो र हल्का हुन्छन्। कम वजनले इन्जिनहरूमा यस्तो ठूलो चुनौती उत्पन्न गर्दैन, किनकि धेरै सानो र ऊर्जा बचत इन्जिनहरू भेट्टाउन सकिन्छ। तर तिनीहरू हावामा धेरै कमजोर छन् र अब पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् - वा केवल धेरै खराब। तिनीहरूको कम मूल्य र उनीहरूको सजिलो हैंडलिंग मिनी Quadrocopter छोराछोरीको लागि आदर्श, शुरुवात वा शुरुवात। यसको कम वजनको कारण, गिरावटको घटनामा मोडेल र सामानको क्षतिलाई निकै कम छ। मूल्यको सन्दर्भमा, तिनीहरू 20 र 70 यूरो बीचको दायरामा रहेका छन्, जस्तै आर्चर स्काईटेक M62 मिनी क्वाडकोप्टर.
आर्चर स्काईटेक M62 मिनी क्वाडकोप्टर 4CH6अक्स ग्य्रो ड्रोन 2.4GHz रिमोट कंट्रोल सूचक
कम्पैक्ट र हल्का डिजाइन। एलईडी रोशनीको साथ यो रातमा उड्न सम्भव छ।
6 अक्ष प्रणालीले क्वाडलाई हातले सुरु गर्न अनुमति दिन्छ।
स्थिर: 6-अक्ष गाईरो ट्रयाक्टर-rotorcraft उडान, बलियो स्थिरता, विभिन्न उडान आन्दोलनहरु Stronger हावा प्रतिरोध लागू गर्न सक्छन्, नियन्त्रण गर्न सजिलो।
2.4 टेक्नोलोजीले हस्तक्षेपको लागि अपनाईयो। एकाधिक कोडकोप्टरहरू एकै समयमा उडान गर्न एकै साथ हस्तक्षेप गर्न सक्दछन्।
रिचार्जेबल उच्च प्रदर्शन ब्याट्री, तपाईं धेरै फ्लाइट मजा रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ।
क्वाड्रोकोप्टर आउटडोर प्रयोगको लागि
उच्च वजन र बलियो इन्जिनहरू समावेश छन् quadrocopters उडान बाहिरको लागि उपलब्ध छ। तपाईंसँग एक स्पष्ट छ अधिक स्थिर रवैया र पवनबाट सजिलै सजग नहुन सक्छ, जसरी बलियो ग्यासहरू पनि यी मोडेलहरूसँग स्पष्ट रूपमा बुझ्दछन्। यस प्रकारको लागि छ Quadrocopter अझै पनि सस्तो प्रवेश-स्तर मोडेलहरू, जसको आकार साइज र उपकरणको साथमा (उदाहरणका लागि, क्यामेरा प्रणाली) चाँडै महत्वाकांक्षी शौक पायलटहरूको लागि धेरै हजार यूरो बढ्न सक्छ। अन्य रिमोट-नियन्त्रण गरिएका मोडेलहरूको समान, यो डिलीवरीको दायरा पनि आउँछ। धेरै Quadrocopter पूरा हुनुहोस् सेट (RTF "उडान गर्न तयार") सबै आवश्यक घटकसँग वितरित। एकीकृत क्यामेरा प्रणालीहरूसँग छविको गुणस्तर वा रिजोल्युशनको विकल्प छ। केहि मोडेलहरू एक प्रस्ताव गर्छन् HD संकल्प, अन्य वितरणn 4K गुणस्तर। क्यामेरा प्रणालीको साथ, छविहरू वास्तविक समयमा प्रसारित छन्, उदाहरणका लागि प्रदर्शन वा FPV चश्मेहरू, वा छविहरूको पछिल्ला मूल्यांकनका लागि मेमोरी कार्डमा भण्डार गरिएको फरक फरक छ। एक द्वारा तस्बिरहरूको वास्तविक समय ट्राफिक प्राप्त छविको जानकारीमा आधारित मोडेलको नियन्त्रण हो, यो व्यावहारिक रूपले नियन्त्रण गरिएको छ भने पायलटमा बसे Quadrocopter, यो नाम यसको लागि हो FPV के लागि "पहिलो व्यक्ति दृश्य" खडा। एफपीवीको सम्बन्धमा पनि एक जीपीएस प्रणाली धेरै प्रयोग गरिन्छ। यसले थप प्रकार्यहरूलाई अनुमति दिन्छ। द्वारा जीपीएस सिस्टम, जुन नेभिगेसन प्रणालीमा पनि प्रयोग गरिन्छ, सक्छ Quadrocopter उन्मुख वा नेभिगेसन डेटा पठाउन सकिन्छ। यस टेलिमेन्ट्रीको माध्यमबाट, उदाहरणको लागि, स्थिति वा वर्तमान उचाइ पढ्न सकिन्छ। केही मोडेलहरू स्वचालित रूपमा फेरि प्रसारण हुन सक्दछन् जब ट्राफिक दायरा छोड्छ, जसले सुरक्षा बढाउँछ, विशेष गरी यदि साथ लामो दूरी Quadrocopter ढाक्नुहोस्। केहि मोडेलहरू द्वारा प्रदान गरिएको अर्को सुविधा जीपीएस प्रणालीको लागि धन्यवाद। यहाँ ट्राफिक सिग्नल स्वचालित रूपमा पछ्याइएको छ। उदाहरणको लागि, यदि "पायलट" उहाँबाट टाढामा छ Quadrocopter चलचित्र बनाउने।
निस्सन्देह तिमी एक साथ हुनेछौ क्यामेराको साथ ड्रोन गर्नुहोस् धेरै मजा गर्न सम्भव छैन। प्रकृतिको आँखाको दृश्यबाट प्रकृति हेर्नको लागी प्रकृति प्रकृति प्रेमीहरूको लागि मात्र खुशी छैन। अन्यथा के छ लुकेको छ धेरै भन्दा माथिबाट हेर्न सकिन्छ। लोकप्रिय संग FPV quadrocopter (पहिलो व्यक्ति दृश्य) त्यो सजिलै सम्भव छ। फायदा सजिलो कार्य हो, यो मूलतः बाह्य र इनडोर प्रयोगका लागि मोडेल हो।
Quadrocopter व्यापारिक उद्देश्यका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं उनीहरूको सम्पत्ति अनुगमन गर्न, भवनहरूको क्षति खोज्न र व्यावसायिक सम्पत्तिमा आँखा राख्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। निगरानी र नियन्त्रणको लागि, उच्च गुणस्तर मोडेलहरू आदर्श सहयोगीहरू साबित हुन्छन्। कानुनी अवस्था नबिर्सनुहोस्, किनभने डाइरेक्टरी प्रयोग गर्दा डाटा सुरक्षा र उडान सुरक्षा सधैं अग्रभूमिमा हुन्छ।
क्यामेरा समर्थनसँग छविहरू छवि सामग्रीको विभिन्न उत्पादन उपकरणहरू। यसकारण, रिमोट कंट्रोलमा प्रदर्शन, प्रदर्शन चश्मा वा प्रदर्शनको लागि पनि प्रदान गरिएको छ।
प्रविष्टि स्तर मोडेलहरू
तपाईं अझै पनि एक उडान संग अनुभवहीन हुनुहुन्छ Quadrocopter, उडानको पहिलो घण्टाको लागि सस्ता मोडेल सिफारिस गर्दछ, खासकर यदि बच्चाहरु यसलाई प्रयोग गर्न चाहन्छन। इन्टरनेट र सानो मोडलहरूको लागि मोडेलहरू सबै उमेरका लागि धेरै रमाइलो गर्छन्। को हानि प्रवेश स्तर मोडेल केहि विशेष सुविधाहरू छुटेका छन्, उडानहरू सीमित छन् र क्यामेरा यन्त्रहरूको कमी छ, तर तिनीहरू उत्कृष्ट मनोरञ्जनको लागि बाहिर पनि प्रदान गर्छन्। तिनीहरू उड्न सजिलो छन् र मूल्य सस्तो छ। पहिले नै 90 को लागी, - यूरो तपाईं शुरुवात गर्न एक राम्रो तरिकाले काम गर्दै हुनुहुन्छ Quadrocopter पहिले।
यदि शुद्ध इनडोर मोडेल चाहिएको छ भने खरिद गर्नु अघि निर्णय गर्नुहोस्। बाहिर, निरन्तर शांत एक उडानको लागि आवश्यक छ।
इन्टरनेट वा स्थानीय डिलरमा खरिद गर्ने?
यो एक खरीद गर्नु भन्दा राम्रो छ इन्टरनेटमा Quadrocopters सूचित गर्न। यहाँ तपाईले उत्पादनको ठूलो चयनमा आधारित जानकारी पाउनुहुनेछ। तपाईंको इच्छित मोडेल किनेको निर्णय तपाई मूलतया राम्रो तरिकाले सम्झौता गर्नु पर्छ, किनकी यहाँ मूल्यहरू अनलाइन रिटेलर्स र स्थानीय रिटेलरहरू बीचको भिन्न मतभेदहरू देखाउँछन्। हामी तपाईंलाई हाम्रो जानकारी सहयोग गर्न आशा गर्छौं।
साइट मा: विशेषज्ञ व्यापार देखि मोडेल
मोडेल निर्माण गर्ने स्टोरहरू तपाईंको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने छैनन्, त्यसैले लामो यात्रा आवश्यक हुनेछ। निस्सन्देह यो अतिरिक्त लागत र समय संग जोडिएको छ। विशेष गरी कष्टप्रद, नजिकैको पार्किङ नजिकै पनि उपलब्ध छैन। केही खरीदारहरूको लागि, तथापि, यसले कुनै कुरा गर्दैन किनकी उनी विशेषज्ञ सल्लाहको मूल्यवान मान्छन् - व्यक्तिगत परामर्श। दुर्भाग्यवश, यो परामर्श सधैं ग्राहक को लागि सकारात्मक छैन, किनकि केहि विक्रेताहरूले स्टक ड्रोन बेच्न प्रयास गर्छन्, जुन निश्चित रूपमा सँधै सत्य परीक्षण विजेता होइनन्। धेरै पसल राख्ने एक शीर्ष मोडेलको रूपमा प्रतिनिधित्व गरिएको छ। विशेषज्ञ पसलहरू फेला पार्न सङ्कलनहरू कठिन छन्। छूटहरू द्वारा प्रदान गरिएका मोडेलहरू, प्राय: मजाको लागि एक छोटो समय।
इन्टरनेटमा: अनलाइन रिटेलरबाट खरिद गर्नुहोस्
तपाइँको किन्नुहोस् Quadrocopter इन्टरनेटमा, तपाईं बिना प्रतिबन्धहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। घडीको वरिपरि दरवाजे यो पनि खरीदारी संसारमा खुला छ। तपाईं निश्चित रूपले सस्तो मूल्यहरू र विभिन्न मोडेलहरूको एक विशाल चयन पत्ता लगाउनुहुनेछ। जब तपाई इन्टरनेटमा खरिद गर्नुहुन्छ दिशा निर्देशन, तनाव र अतिरिक्त लागतहरू बचत गरिन्छ। निस्सन्देह यो तुरुन्तै दुर्व्यवहार प्रयोग गर्न सम्भव छैन, तर तिनीहरू हुन् वितरण समय कम र एक प्रतीक्षाको लायक। एक व्यक्तिगत परामर्श लागेन, तर यो मौलिक उद्देश्य र ग्राहक अनुकूल छैन। एकमा निकासी तपाईं अनलाइन खरिद नगरी बिना गर्नु पर्दैन।
Quadrocopters को दूरस्थ नियंत्रित विमान र हेलीकाप्टरहरूमा लाभ
एक Quadrocopter propellers (rotors) को माध्यम ले यसको बहाव विकसित। हवाई जहाजहरूको तुलनामा, जो पखेटाहरूमा मात्र एक निश्चित प्रवाह गतिमा लिफ्ट उत्पन्न गर्छ, एक Quadrocopter चढेर र ठाडो उर्लियो, र हावामा उभिएर। त्यसैले त्यहाँ आदर गर्न कुनै कम गति छैन र कुनै रनवे चाहिँदैन। त्यसकारण केही मोडेलहरू पनि घरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। क्यामेरा दृश्यहरूले पनि क्षमताको फाइदा उठाउँछन् Quadrocopter.
रिमोट-नियन्त्रण गरिएको हेलीकाप्टरले फ्लाइट विशेषताहरू आउँछ Quadrocopter धेरै नजिक तथापि, एक हेलीकाप्टरले अन्य आधारहरूमा काम गर्छ, जो नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ। उहाँसँग एक मात्र संभवतः दुई रोटरहरू छन्, जुन भन्दा भन्दा ठूलो छन् quadrocopters छन्। विभिन्न हवा आचरणहरू लिनको लागि, एक हेलीकाप्टरले यांत्रिक घटकहरू चाहिन्छ, उदाहरणका लागि स्विशप्लेट वा समायोज्य रोटर ब्लेड। न केवल ढाँचा अधिक जटिल छ तर अपरेसन पनि। साथै, हेलीककाप्टरहरूको रोटरहरू भन्दा धेरै ठूलो छन् Quadrocopter, यसको अतिरिक्त, हेरविचार लिइन्छ कि रोटर ब्लेडहरू कहीं ठाउँमा बस्छन्। हेलिकप्टरको शुरुवातमा एक चरम झुकाव पनि जमीनमा रोटर ब्लेडको असर हुन सक्छ, जुन सामान्यतया मोडेलको विनाश बराबर हुन्छ। एक Quadrocopter चार साना रोटरहरू छन्, जुन "सुरक्षात्मक पिंजरेहरू" सँग पनि सम्लग्न गर्न सकिन्छ। नतिजाको रूपमा, रोटर ब्लेडले कहीं पनि कहीं पनि हड्ताल गर्न सक्दैन। उडान आंदोलनहरू उठ्छन् quadrocopters केवल व्यक्तिगत मोटर्सको विभिन्न गतिद्वारा। यसले तिनीहरूको डिजाइनलाई सजिलो बनाउँछ र सञ्चालन सजिलो छ। अहिल्यै पनि मित्रवत "पायलटहरू" पकड्दैनन् रिमोट-नियन्त्रण हेलीकाप्टर सँगै quadrocopters मा।
Quadrocopter सस्तो रूपमा उत्पादन गर्न सकिन्छ र आवश्यक उडानको लागि धेरै ठाउँ चाहिँदैन। नतिजाको रूपमा, तिनीहरू टाढा-नियमन मोडेलहरूको लोकप्रियताको शीर्षमा छन्। फलस्वरूप, त्यहाँ बढ्दो संख्याहरू पनि छन् drones हावामा। विधायकहरूले बेमानी मिसाइलहरूको बढ्दो संख्यामा खतरा देखाउँछन्, किनकि डनर नियमहरू पारित भएको थियो। यो प्रस्थान प्रस्थान मा निर्भर गर्दछ र तदनुसार कठोर छ। यस बाट सानो अंश:
250 ग्राम भन्दा बढी लेनेको वजनबाट, मोडल एयरफील्डमा पनि सँधै एक अनिवार्य लेबलिंग छ! टिकाऊ र कानूनी रूपमा साथ fireproof, डनको प्रयोगकर्ताको नाम र ठेगानाको चिन्ह लगाउनु पर्छ Quadrocopter निस्क्रिय हुनु2किलो भन्दा बढीको एक लेनेको वजनबाट अनिवार्य चिन्ह लगाउनुको साथै, एक उडान प्रमाणपत्र आवश्यक छ, जुन हरेक5वर्ष दोहोरिन्छ। मूलतया, ड्रोनहरू 100 मिटर भन्दा बढी उडान हुँदैन। माथिको उडानहरूको लागि, विमानस्थल विमानस्थल प्राधिकरणबाट प्राप्त हुनु पर्छ। नो-फ्लाइज क्षेत्रहरूबाट टाढा बस्नु महत्त्वपूर्ण छ, उदाहरणको लागि नजिकैका हवाईअड्डाहरू, प्रकृतिको भण्डार, मानिसहरूको भीड वा मुख्य सडक। विदेशी भूमि भन्दा उडान मालिकको अनुमति चाहिन्छ। क्यामेराहरूसँग मोडेलहरूको लागि थप कारकहरू महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। जसरी अजनबारीहरू उनीहरूको सहमति बिना अरुमा मन पराउँदैनन् भने, स्वाभाविक रूपमा गोपनीयताको पनि क्यामेरा ड्रोनको प्रयोगमा लागू हुन्छ।
त्यसैले जान्न आवश्यक छ वा एक प्रयोग गर्नु अघि सटीक र क्षेत्रीय कानून परिस्थिति जाँच गर्न आवश्यक छ Quadrocopter उड्यो। साथै, नियमहरू निरन्तर विस्तारित हुँदैछन्, जुन मालिक र प्रयोगकर्ताको रूपमा सूचित हुनुपर्छ।
शुरुवातको लागि ScharkSpark ड्रोन गार्ड, FPV HD क्यामेरा / भिडियोको साथ ड्रोन, पोर्टेबल RC Quadcopter, 2,4 G6अक्ष हेडलेस मोड ऊंचाई एक कुञ्जी रिटर्न 3D फ्लिप र रोलिंग टोय सूचक
बलियो ब्याट्री र अधिक उडान दूरी: 3,7 V 650 mAh ली-पो ब्याट्रीको कारणले
10-12 मिनेट सम्म उडान समय र उडान दायरा 80 मिटर के साथ
सुरक्षाले पूर्ण उडान आनन्द सुनिश्चित गर्दछ। (अधिक ब्याट्री किन्नको लागि, भ्रमण गर्नुहोस्
Amazon.de लाई ASIN: B07DJ1BJ9S)
रिमोट कन्ट्रोल वा मोबाइल फोनद्वारा नियन्त्रण: आधारमा ड्रोन नियन्त्रण गर्दै
रिमोट कन्ट्रोल वा तपाईंको स्मार्ट फोन मार्फत विभिन्न अनुभव र अझै पनी बनाउँदछ
धेरै रमाईलो। तपाईं यो क्यामेरा ड्रोन आफ्नो स्मार्ट फोनमा अनुप्रयोग मार्फत प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ
नियन्त्रण, क्यामेरा र अन्य सबै प्रकार्यहरू सक्रिय गर्नुहोस् र यति धेरै रोमाञ्चक
क्षणहरूको आनन्द लिनुहोस्।
HD FPV क्यामेरा र प्रत्यक्ष भिडियो: भिडियो ड्रोन एक HD क्यामेरा संग सुसज्जित छ,
जुन तपाईंसँग उच्च रिजोलुसन भिडियोहरू रेकर्ड गर्नुहोस् र हवाई फोटोहरू खाली गर्नुहोस्
गर्न सक्छन्। वाइफाइ वास्तविक समय प्रसारण FPV प्रणाली तपाईंको सेलफोनको साथ FPV ड्रोन प्रयोग गर्न सक्दछ
जडान गर्नुहोस् र ड्रोनको दृश्य तपाईंको फोनमा सिधा प्रदर्शित हुनेछ। त्यसोभए तपाईं सक्नुहुन्छ
विस्तृत फोटो र भिडियोमा असाधारण क्षणहरू क्याप्चर गर्नुहोस्
उत्तम शुरुआत ड्रोन: ड्रोनले राम्रो उडान स्थिरता र हावामा पनि देखाउँदछ
स्वचालित होभरिंग समारोह एक निश्चित उचाइमा ड्रोन स्थिर गर्न सक्दछ
फ्लोट। ड्रोन स्वचालित रूपमा सुरू हुन्छ र एक बटन को स्पर्श मा अवतरण। यी सबै
रिमोट कन्ट्रोल सुविधाहरुले ड्रोन एकदम शुरुवातको अनुकूल बनाउँछ।
उच्च गुणवत्ताको उत्पादन - निश्चितको लागि: यो सायद तपाईंको पहिलो ड्रोन भए पनि,
तपाईं आराम गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि ड्रोनसँग 3- बर्ष उन्नत छ
वारेन्टी। हामी जहिले पनि तपाईंको पक्षमा हुन्छौं र हाम्रो समर्पित ग्राहक सेवा तपाईंको हुनेछ
उडानमा सकेसम्म चाँडो समस्याहरू समाधान गर्नुहोस्।
होली स्टोन मिनी ड्रोन HS170 RC Quadcopter 2.4GHz6Axis Gyro हेलीकाप्टर रिमोट कन्ट्रोल, निलो सूचकको साथ रिमोट नियन्त्रण
6-Axis Gyro 2.4G Hz स्थिरीकरण प्रणाली, ड्रोन प्रशिक्षणको लागि उत्तम विकल्प
तीन गति मोडहरूले शुरुआत देखि विज्ञसम्म बिभिन्न आवश्यकता पूरा गर्दछ
दायरा: 30-50 मिटर। रनिंग टाइम: 6-8 न्यूनतम। लोड समय: 60-80 न्यूनतम। (वर्तमान इनपुट <0.5A-1A)
हेडलेस मोड प्रणाली: रिमोट कन्ट्रोलको माध्यमले नियन्त्रण, सजिलो नियन्त्रण, थप रमाईलो गर्दछ
उत्तम ग्राहक सेवा: यदि तपाईंलाई उडानको बेला कुनै समस्या वा प्रश्नहरू छन् भने, कृपया हामीसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्। हामी तपाईंलाई उत्तम ग्राहक सेवा प्रदान गर्नेछौं
Q9 आर सी ड्रोन होल्ड अप र निलो र हरियो रातको बत्ती संग, क्वाड्रोकाप्टर २ ब्याट्रीको साथ, २० मिनेट उडान समय र प्रोपेलरको पूर्ण सुरक्षा गर्न, बच्चाहरू र शुरुआतीहरूको लागि खेलौना ड्रोन
Sk आकाशलाई उज्यालो बनाउनुहोस्】 चमकदार निलो र हरियो एलईडी बत्तीहरू Q9 ड्रोनको चार सुरक्षात्मक फ्रेमहरूमा स्थापित छन्। तिनीहरूले एक मजबूत प्रकाश प्रभाव र एक जीवन्त उडान अनुभव प्रदान गर्दछ। प्रकाशका लागि तीन फरक प्रदर्शन मोड सबैलाई चकित तुल्याउँछन्!
F सुरक्षित र टिकाव X4पूर्ण कभर प्रोपेलरहरूको संरचनाले सुरक्षित उडान सुनिश्चित गर्दछ जसले तपाईंको बच्चाहरूलाई घुमाउने प्रोपेलरहरूबाट चोटपटकबाट बचाउँछ। उच्च गुणस्तरको एबीएस सामग्री जुन अनगिन्ती वार र झरनाहरूको सामना गर्दछ। बच्चाहरू र शुरुआतीहरूको लागि धेरै टिकाउ र सुरक्षित ड्रोन।
【प्रयोगकर्ता-मैत्री】 1: तपाईं केवल सुरू / भूमि / एक स्पर्श को साथ ड्रोन फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। 2: तीन गति स्तर छनौट गर्नका लागि। तपाईं एक शुरुआत वा मास्टर हो कि, तपाईं सही गति पाउनुहुनेछ। एक्सएनयूएमएक्स: हेडलेस मोडमा, तपाईंलाई ड्रोनको दिशा निर्धारण गर्न विचलित हुनु आवश्यक पर्दैन। 3: उचाई होल्ड सुविधाले तपाईंको ड्रोनलाई हावामा स्वचालित रूपमा होभर गर्न अनुमति दिन्छ। (यदि तपाइँ कन्ट्रोलरको साथ केहि गर्नुहुन्न भने पनि) यी सबै सुविधाहरूले ड्रोनलाई अत्यन्त शुरुआत-अनुकूल बनाउँछ।
Flight उडान समयको 20 मिनेट X2ब्याट्रीहरूको साथ सुसज्जित, तपाईंको उडान समय 20 मिनेटमा बढाइयो। हामी तपाइँलाई एक राम्रो र अधिक टिकाऊ उडान अनुभव प्रदान गर्दछौं।
Operation बहु अपरेशन ट्रिकहरू X 360- ग्रेड फ्लिपको साथ र तपाईंको उडान अनुभवलाई समृद्ध बनाउन इन-सीटू स्वत: घुमाउने सुविधाको साथ।
Q8 FPV DRone क्यामेरा HD प्रत्यक्ष प्रसारण र रातको प्रकाश संग, RC वाईफाई ड्रोन Quadcopter ऊंचाई र गुरुत्वाकर्षण सेन्सर संग, बच्चाहरु र शुरुवात (पहेलो) प्रदर्शन को लागी Toy Drone
【एलईडी लाइट / पूर्ण सुरक्षा】 अद्वितीय प्रकाश डिजाइन (प्रबुद्ध गार्ड रिंग) तपाईंलाई कडा रात प्रकाश प्रभाव र एक जीवन्त रात उडान अनुभव दिन्छ। ठूला गार्ड रिंग, जो प्रोपेलर्सलाई टक्करबाट बचाउँछ, सुरक्षित उडान सुनिश्चित गर्दछ। उत्तम डिजाइन।
【HD क्यामेरा र WIFI वास्तविक समय प्रसारण Wi Wi-Fi वास्तविक समय प्रसारण FPV प्रणाली आफ्नो मोबाइल फोन मा ड्रोन जडान र प्रत्यक्ष भिडियो हेर्न र आफ्नो स्मार्टफोन मा FPV सुविधा संग चित्र / भिडियो लिन सक्दछ। (आईओएस र एन्ड्रोइड प्रणाली दुबै लागू छन्)।
L फ्लाई गर्न सजिलो】 एक कुञ्जी स्वत: टेक अफ / ल्यान्ड / रिटर्न,3स्पीड मोड, हेडलेस मोड र अधिकको विशेषता राख्दै। उचाई होल्ड सुविधाले तपाईंको ड्रोनलाई हावामा स्वचालित रूपमा होभर गर्न अनुमति दिन्छ। (यदि तपाइँ कन्ट्रोलरको साथ केहि गर्नुहुन्न भने पनि) यी सबै सुविधाहरूले ड्रोनलाई अत्यन्त शुरुआत-अनुकूल बनाउँछ।
Ject ट्र्याजेक्टोरी प्रकार्य र गुरुत्वाकर्षण सेन्सर मोड tra ट्र्याजेक्टोरी प्रकार्यमा, तपाईं एपीपीमा उडान मार्गहरू तान्न सक्नुहुनेछ, र ड्रोन तोकिएको मार्गका अनुसार उड्दछ। / ड्रोनको दिशा नियन्त्रण गर्न तपाईको फोनलाई प्यान गर्नुहोस्। (अगाडि / पछाडि / बाँया / दाँया) उदाहरणका लागि, फोनलाई बायाँ तिर स्विing गर्नुहोस् र ड्रोन तुरुन्तै बाँयामा उडान गर्दछ। कम्प्युटर खेल जस्तै!
【गेस्चर नियन्त्रण र बौद्धिक भ्वाईस कन्ट्रोल】 "ठीक छ" तस्वीर लिनको लागि, "पीस" एक भिडियो रेकर्ड गर्न। क्यामेरा दृश्यको क्षेत्र भित्र एक विशिष्ट इशारा गर्नुहोस् - ड्रोनले फोटो / भिडियो आदेश कार्यान्वयन गर्दछ। / अंग्रेजीमा साधारण आवाज आदेशहरूको साथ तपाईंको ड्रोन नियन्त्रण गर्नुहोस्। (टेक अफ, ल्यान्डि,, बाँया, दाँया, अगाडि, पछाडि)
क्यामेरा 511P एच.डी. वाईफाई एफपीवी लाइभ ट्रांसमिशन, आरसी क्वाडकोप्टर, एचिन एक्सएनक्सक्स जीपीएस डोनोन, मलाई मोड, 1080D फ्लिप, प्रक्षेपण उडान, Beginner को लागि तह ड्रोन पछ्याउनुहोस्, नयाँ रिलीज (ब्ल्याक) डिस्प्ले
जीपीएस पोजिशनिंग मोड: जीपीएस पोजिशनिंग सिस्टमको साथ, तपाईले ड्रोन गुमाउने चिन्ता लिनु हुँदैन, ड्रोन हराउने संकेत वा कम पावरमा। यो स्वचालित रूपमा फेरि उडान हुनेछ र ड्रोन कहिल्यै हराउने छैन। तपाईले कुञ्जीको लागि ब्याकस्पेस कुञ्जी थिच्न पनि सक्नुहुन्छ। ड्रोन सुरू बिन्दुमा फर्कन्छ
1080P १२० ° FOV 120 45 ° समायोज्य HD क्यामेरा: १P०P १२० ° FOV 1080 120 ° समायोज्य HD क्यामेराले उच्च गुणवत्ताको भिडियो र हवाई फोटोग्राफी सक्षम गर्दछ। कुनै ढिलाइ बिना नै द्रुत छवि स्थानान्तरण, प्रत्येक छवि १ *० * १ 45० पिक्सेल हो - १२० ° चौडा कोण विस्तारित अवलोकन कोण समायोज्य ° 1920 ° समायोज्य कोण तपाईंलाई प्रत्येक अद्भुत क्षणलाई कैद गर्नको लागि बहु कोणको साथ विश्व देखाउँदछ एक उत्कृष्ट अनुभव प्रदान गर्दछ।
मेरो अनुसरण गर्नुहोस् मोड र कक्षा मोड र वेपोइन्ट मोड: फलो-मे मोडमा, ड्रोनले स्वचालित रूपमा हरेक आन्दोलन पछ्याउँदछ। सेल्फीको लागि आदर्श ड्रोन र मनमा फोटो वा भिडियो लिदै। कक्षा मोडमा, ड्रोन मोबाइल उपकरणको चारै तिर उडेर जान्छ, तपाईं धेरै कोणहरूका साथ सेल्फ-टाइमर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। वेपोइन्ट मोडमा तपाईं एक मार्ग कोर्न सक्नुहुन्छ, ड्रोन तपाईंको ड्राइंग मार्ग अनुसार उडान हुनेछ।
शक्तिशाली ब्याट्री र स्थिर उडान: १ minutes मिनेट सम्मको उडान समयको आनन्द लिनुहोस्। एकै पटकमा रमाइलोको आनन्द लिनुहोस् र शक्तिशाली ब्याट्री अधिक टिकाऊ छ। अल्टिट्यूड होल्ड प्रकार्यले निश्चित उचाइमा एक होभरलाई सुनिश्चित गर्दछ। यस सुविधाले महान हवाई फोटो र भिडियोहरू सम्भव बनाउँदछ।
यदि तपाईंलाई उत्पादनसँग कुनै समस्या छ भने, तपाईं विक्रेताको ग्राहक सेवा वा आधिकारिक ईमेल ठेगानालाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ([इमेल सुरक्षित]) प्रोपेलर टर्दैन, यसको मतलब इन्जिन गियरबक्स बदल्नु पर्ने हुन्छ, नयाँ वर्ष २०२० happy!
SNAPTAIN मिनी ड्रोन H823H प्लस3ब्याट्रीको साथ 21 मिनेट उडान समयको लागि, आरसी ड्रोन, Quadrocopter मिनी हेलीकाप्टर उचाई, हेडलेस मोड, 3D फ्लिपहरू र3गति मोड बच्चाहरूको प्रदर्शनको लागि।
21 मिनेट उडान समय: ड्रोन3हटाउन योग्य र रिचार्जेबल ब्याट्रीले सुसज्जित छ, र उडान समय तीन गुणा 21 मिनेटमा वृद्धि भयो। एक उत्तम उपहार, अधिक ऊर्जा र अधिक रमाईलो।
शुरुआती र बच्चाहरूको लागि सजिलो: मिनी ड्रोनको रिमोट कन्ट्रोलले मोड2लाई समर्थन गर्दछ, सबैभन्दा सामान्य मोडेल उडान मोड: बाँया स्टिक आरोहण वा अवरोहको लागि प्रयोग गरिन्छ। बच्चाहरू र शुरुवातकर्ताहरूले सजिलै यो ड्रोन नियन्त्रण गर्न सक्दछन्।
बहु प्रकार्यहरू: यो ड्रोन H823H प्लस 360 roll रोल र टर्न गर्न सक्दछ, त्यहाँ अल्टिट्यूड, हेडलेस मोड, कम ब्याट्री अलार्म, एक बटन स्टार्ट र ल्यान्डि,, र एक बटन फिर्ती पनि छन्। बच्चाहरूले अपरेटबिलिटी अनुसार एक गति (कम / मध्यम / उच्च) छनौट गर्न सक्दछन्। स्न्याप्टेन्टले सानो सानो पाइलटहरू बनाउँछ!
सुरक्षित र टिकाऊ: पूर्ण रूपमा कभर गरिएको, गैर-विषाक्त, नरम-प्लास्टिक हाउजिंगले खस्ने हवाई जहाजको टक्करको प्रभावलाई घटाउँछ र खेल रोक्छ। आमा बुबाको लागि बुद्धिमानी छनौट!
सुपर मिनी ड्रोन: पोर्टेबल साइजको साथ तपाई सजिलै मिनी-ड्रोन आफ्नो जेबमा राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईं जहाँ लैजानुहुन्छ। अल्ट्रा-उज्यालो बिल्ट-इन एलईडी लाइटले बच्चाहरूलाई उडानको दिशा सजिलै पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ र उडानको अनुभवलाई उत्कृष्ट बनाउँदछ। नोट: रिमोट कन्ट्रोल ब्याट्रीहरू समावेश गरिएको छैन।
SANROCK GD65A मिनी ड्रोन बच्चाहरू र शुरुआतीहरूको लागि, बच्चाहरू ड्रोन, आरसी ड्रोन क्वाड्रोकोप्टरको साथ उचाइ होल्ड, हेडलेस मोड, ON-key फिर्ती, उत्तम खेलौना ड्रोन, थप ब्याट्री सूचक सहित।
बच्चाहरु को लागि शेर - GD65A बच्चाहरु ड्रियो सुविधाहरु को आसान नियंत्रण, स्थिर उडान, फ्लाइट क्षेत्र को कुनै सीमा र टिकाऊ सामाग्री, बच्चाहरु, शुरुआती शुरुवातहरु र कसरत उपयोग को लागि उपयुक्त संग आउछ।
ALTITUDE - मिनी आकारमा डनर ऊंचाई हिच मोडको साथ हुन्छ, होभर नियन्त्रण अधिक स्थिर बनाउँछ।
नेतृत्व मोड - तपाईं यसको बारेमा चिन्ता बिना उडान को समयमा कुन पक्ष डन को निर्धारित गर्न आवश्यक छैन।
एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन - प्रकार्य बटनमा केवल एक क्लिकको साथ, डाइरेक्ट्री स्वचालित रूपमा तपाईलाई फिर्ता पुग्छ।
पोर्टेबल र सुरक्षित - ड्रोन सानो छ र कहिँ पनि लिन सकिन्छ, उदाहरणका लागि। बी यात्रा गर्दा, भोजहरूमा, खेलकुद कार्यक्रमहरूमा र रोमांचमा। हामी १२ महिनाको वारंटी र आजीवन मैत्री ग्राहक सेवा प्रस्ताव गर्दछौं ([इमेल सुरक्षित]).
सिग्नल रिमोट कन्ट्रोन ड्रोन2रिप्लेसमेन्ट ब्याट्री, आरसी ड्रोन एलईडी संग, 360 ° फ्लिप, ग्रेभिटी सेन्सर, थ्रो फ्लाइंग क्वाड्रोकप्टर इन्फ्रारेड अवरोध अवहेलना केटाहरूको लागि ब्यूँता उपहार सूचक
बहु नियन्त्रण विकल्प - आरसी ड्रोनसँग तीन प्रकारका रिमोट कन्ट्रोलहरू छन्: घडी, पानीको थोपा र ह्यान्डहेल्ड। बहु प्ले विकल्पहरू, शुरुवातकर्ताहरूलाई प्रयोग गर्न सजिलो।
इशारा अनुसन्धान - जब ड्रोन हावामा फ्याँकिन्छ र यसमा प्रकाश बिस्तारै चम्कन्छ, इशारा मान्यता समारोह स्वचालित रूपमा सक्रिय हुन्छ। त्यसोभए तपाईं आफ्नो इशाराहरूको साथ उडानको दिशा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ।
असफल स्टन्ट - रिमोट - नियन्त्रित क्वाड्रोकोप्टर 360 around वरपर बिभिन्न दिशामा घुमाउन सकिन्छ: अगाडि, पछाडि, बाँया र दाँया। यो सजिलो नियन्त्रण को लागी एक स्वचालित वायवीय उचाई समायोजन प्रणाली संग सुसज्जित छ। जब ड्रोन इन्डक्शन उडान मोडमा हुन्छ, संक्षिप्त रूपमा वाटरड्रप आकारको रिमोट कन्ट्रोलमा स्विच थिच्नुहोस् ड्रोनलाई उचाल्न र ल्याउनका लागि।
कूल लाइट्स - नेभिगेसन संकेतको रूपमा अल्ट्रा-उज्ज्वल एलईडी बत्तीहरूले सुसज्जित, विमान तुरुन्तै ध्यानको केन्द्र बन्छ। यसले राती ड्रोन पनि खेल्न अनुमति दिन्छ।
इन्फ्रेडेड ओब्स्टाकल रोकथाम - यदि उडानको दौरान विमानले अवरोधहरू सामना गर्दछ भने, इन्फ्रारेड बाधा अवरोध मोड सक्रिय गर्नको लागि वाच रिमोट कन्ट्रोलको बटन तीन पटक छोटो प्रेस गर्नुहोस्, ताकि तपाईं लापरवाह खेल्न सक्नुहुनेछ।
क्यामेराको साथ पोटेन्सिक मिनी ड्रोन, D18 फोल्डेबल 1080P वाइफाइ एफपीभी क्वाडकोप्टर अप्टिकल फ्लो र डुअल ब्याट्री, हाइट होल्ड, बच्चाहरूको शुरुवात गर्ने र विशेषज्ञ सूचकको लागि एन्टी टकराव आरसी ड्रोन।
【फोल्डेबल डिजाइन र नियन्त्रण गर्न सजिलो】: ड्रोन फोल्ड गर्न योग्य छ र सजिलै घर बाहिर ल्याउन सकिन्छ। सुरूवात वा बटनको साथ अवतरणको कार्य, उचाई र हेडलेस मोड होल्डिंगले ड्रोनको अपरेशनलाई सजिलो बनाउँदछ। यो शुरुआती र फोटोग्राफरहरूको लागि आदर्श हो।
The अप्टिकल फ्लो पोजिशनिंग】: अप्टिकल फ्लो एक विशेष प्रकार्य हो जसले ड्रोनलाई रिमोट अपरेटिंग बिना पाइलटको आफ्नो स्थिति पकड गर्न अनुमति दिन्छ।
【वाइफाइ वास्तविक समय छवि स्थानान्तरण】: HD 1080P वाइफाइ क्यामेराबाट सुसज्जित, D18 ड्रोनले ढिलाइ नगरी वास्तविक-समय भिडियो रेकर्ड गर्दछ। सेल्फी ड्रोन जहाँसुकै तस्विर लिनको लागि आदर्श हो।
Ual डुअल ब्याट्री】: दुई छुटाउन योग्य उच्च प्रदर्शन ब्याट्रीले ड्रोनलाई अधिकतम 20 मिनेट (10 + 10 मिनेट) लामो बनाउँछ। तिनीहरूले तपाईंको उडान अनुभव बृद्धि गर्दछ।
Flight एक सुरक्षित उडानको लागि सुरक्षा】: D18 एक आत्म-संरक्षण समारोहको साथ सुसज्जित छ। यदि यो रिमोट कन्ट्रोलको दायरामा उडानमा जान्छ वा ब्याट्री कम हुन्छ भने, एयरक्राफ्ट एक आत्म-सुरक्षा स्थितिमा जान्छ र स्वचालित रूपमा बिस्तारै कम हुन्छ, त्यसैले तपाईलाई आफ्नो ड्रोन गुमाउनु पर्ने चिन्ता लिनु पर्दैन।
एचडी क्यामेरा, पोर्टेबल क्वाडकोप्टर 2.4G6अक्ष रिमोट कन्ट्रोल, ऊंचाई, Headless मोड, स्पीड मोड, एक कुञ्जी स्टार्ट / लैंडिंग, हटाउन योग्य बैटरी A30W को साथ पोटेंसिक एफपीवी आरसी ड्रोन - निलो सूचक
【एपीपी नियन्त्रण र गुरुत्वाकर्षण प्रेरणा मोड】: तपाईंको फोनमा वाइफाइ जडान पछि एक एपीपी मार्फत तपाईंको ड्रोन अपरेट गर्नुहोस् (आईओएस वा एन्ड्रोइड)। तपाईले गुरुत्वाकर्षण प्रेरणा मोड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको ड्रोन अगाडि / पछाडि, बाँया / दाँया उडान गर्नका लागि र दिशामा जुन तपाई आफ्नो फोनसँग निर्दिष्ट गर्नुहुन्छ।
【HD FPV क्यामेरा】: तपाईंलाई उडान समयमा उच्च-गुणवत्ता FPV वास्तविक-समय भिडियो र छविहरू क्याप्चर गर्न अनुमति दिन्छ।
【कस्टम उडान मार्ग मोड र हेडलेस मोड】: स्क्रिनमा तपाईंको उडान योजना कोर्नुहोस् र निर्दिष्ट मार्गमा ड्रोन उडान गर्दछ। एक पटक हेडलेस मोड सक्रिय भएपछि, पाइलटले जुनसुकै ठाउँमा ड्रोन उडान गर्न सक्छ जुन ड्रोनले सting्केत गरिरहेको हो भन्ने पर्वाह नगरी।
【एउटा सुरू / अवतरण बटन】: क्वाड्रोकाप्टर एक निश्चित उचाइमा माथि जान्छ र घुमाउँछ वा बिस्तारै भूमिमा एक बटनको धक्कामा अवतरण गर्दछ। सबै स्तरका खेलाडीहरूलाई सही नियन्त्रण र उत्कृष्ट प्रदर्शनको साथ ड्रोन उडान गर्न अनुमति दिनुहोस्।
Lace बदल्न योग्य ब्याट्री】: ड्रोन एक लामो ब्याट्री प्रतिस्थापन द्वारा तपाईं र तपाईंको परिवारको लागि उडान उडान समय समर्थन गर्न सक्छ।
अघिल्लो लेखइस्त्री स्टेशन
अर्को लेखटाढाको नियन्त्रित विमान